राजनीति – Samabeshi Khabar
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२०२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२०२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२० by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । प्रचण्ड–नेपाल स्थायी समितिको बैठकले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको छ। आज पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। पत्रकारलाई छोटकरीमा जानकारी दिएपछि ‘फेरि भेटौंला’ भन्दै उनी बाहिरिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता ऋषिराम कट्टेललाई दिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेकपा खारेज भएको हो। अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । यसअघि नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बानेश्वरको होटल अर्यालमा छलफल गरेका थिए। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमालेमै रहेर पनि ओलीसँग लड्न नेपाल समूह सक्षम रहेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का १२० प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये अहिले नेपाल समूहसँग ४०...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:२४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:२४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:२४ by Samabeshi KhabarNo Comments
बादल समूहले पद छाड्ने तर ओलीको साथ नछाड्न
काठमाडौं, (ससं) । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू पुनःस्थापित नेकपा एमालेमा सामेल हुने भएका छन् । अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले बादल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणी थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका मन्त्री र नेताहरूसँग आइतवार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूसमेत छलफलमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला यस्तो आएको भन्दै ‘अब तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ? म तपाईंहरूलाई जे अनुकुल हुन्छ त्यही वातावरण बनाइदिन्छु’ भनेका थिए । जवाफमा सबैजनाले आफूहरू मन्त्री पदका लागि ओली पक्षमा नलागेको भन्दै विचार,सिद्धान्त र कम्युनिष्‍ट आन्दोलन अघि बढाउने सवाल भएकाले प्रचण्डसँग जान नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दियो । ...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:५०२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:५०२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:५० by Samabeshi KhabarNo Comments
मेरो पार्टी त अदालतले भनिदियो : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, (ससं) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कुन पार्टीको भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको बताएका छन्। महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म हिजो बोलिनँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको कुन पार्टी होरु भनेर सोध्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईं कुन पार्टीको ? भनेर।’ प्रचण्ड–माधव पक्षलाई लक्षित गर्दै उनले आफूलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि हटाइदिएको बताए। ‘उहाँहरूले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि हटाइदिनुभएछ। म कुन पार्टीको भनेर अदालतले भनिदियो, उहाँहरू अदालतको निर्णय पनि मान्नुहुन्न’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो, सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ।’ ​ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ​पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका मान्छेहरूले लडाइँ गरेर समस्या खडा गरिरहेको बताए। ‘यतिबेला देश चुनावमा गइसक्थ्यो। त्यसपछि राम्रो सरकार बन्थ्यो...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:४१२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:४१२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:४१ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले महिलाहरुले ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । आज (सोमबार) १११औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवरमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको टेम्पो चालक महिला सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भुसालले ५० प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरुले सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । संविधानत्: महिलाहरुले धेरै अधिकार पाएको भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा समेत जाड दिएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हामी ५० प्रतिशत बढी रहेका महिलाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सबै क्षेत्रमा अवसर अवसर पाउनुपर्दछ । त्यसैले एकातिर पाएका अधिकारको कार्यान्वयन हो भने नपाएका अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने क...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:५४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:५४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:५४ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसके कांग्रेस समाप्त (कोल्याप्स) हुने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले अब महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले महाधिवेशन अब सर्न नसक्ने भन्दै पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस विधिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।’ फरक प्रसंगमा उनले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारोमा परेका समयमा देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीभित्र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने महसुस हुन सक्ने तर, देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाको प्रसंगमा उनले अदालतले गरेको फैसला विधिको विजय भएको टिप्पणी गरे। रासस...
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १६:१९२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १६:१९२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १६:१९ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेललाई सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला गरेलगत्तै प्रचण्ड–माधव समूह आकस्मिक छलफलतिर लागेका छन् । सिंहदरबारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । अदालतले एमाले र माओवादी एकीकरण अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यसबारे निर्णय लिन यो समूहका नेताहरु आकस्मिक छलफलमा जुटेका हुन् ।...